सीके राउतको पार्टी पनि उपनिर्वाचनमा होमियो – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१ श्रावण २०७७, बिहीबार ००:५९ English
सीके राउतको पार्टी पनि उपनिर्वाचनमा होमियो
महोत्तरी, २७ कार्तिक । गत फागुन २४ गते विखण्डनको बाटो परित्याग गरी मूलधारको राजनीति गर्ने सहमति गरेका डा. सीके राउत नेतृत्वको ‘जनमत पार्टी’ले पनि उपनिर्वाचनमा भाग लिएको छ । राउत नेतृत्वको पार्टीले महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा उमेदवारी दर्ता गरेको छ ।
जनमत पार्टीले मङ्सिर १४ गतेको उपनिर्वाचनका लागि पिपरा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा अञ्जलीदेवी मण्डल र सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिका–१ मा दिनेश राय यादवलाई उम्मेद्वार बनाएको छ । डा. राउतले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत आफ्नो पार्टीले उपनिर्वाचनमा भाग लिएको जानकारी गराएका छन् ।
गत फागुन २४ गते सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरेर विखण्डनको बाटो परित्याग गर्दै डा. राउत मूलधारको राजनीतिमा आएका थिए ।
२७ कार्तिक २०७६, बुधबार १४:१७ मा प्रकाशित